Ahoana ny fametrahana VLC 3.0 amin'ny Ubuntu 16.04 | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana VLC 3.0 amin'ny Ubuntu 16.04
Tsy maninona izay rafitra fiasa misy azy: miafara aminy foana aho mpilalao vlc napetraka ao amin'ny rafitra. Ny antony dia tena tsotra: na dia tsy maintsy miaiky aza aho fa tsy salama amin'ny rakitra sasany miaraka amin'ny extension .mkv ary tsy tiako ny interface azy (zavatra azo ovaina mora foana), izy io koa dia saika milalao ilay rakitra foana. Miezaka milalao aho. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mpandeha an-tongotra rehetra mamela ahy hilalao karazana raki-tsary sy horonan-tsary.
Amin'izao fotoana izao, ny kinova azo alaina avy amin'ny trano firaketana ofisialin'i Ubuntu 16.04 VLC 2.2.2-5 izy io, fa VLC 3.0.0 dia efa sedraina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fametrahana ny kinova VLC manaraka, fa tsy tsy tadidio aloha fa rehefa mametraka rindrambaiko amin'ny dingana fitsapana dia mety hiaina olana tsy ampoizina isika, toy ny fianjerana, fanidiana tsy ampoizina na ny tsy fahaizana milalao rakitra manokana.
Mametraka VLC 3.0.0
Miaraka amin'ny fahaizako mampiasa ilay rindrambaiko, dia tsy maintsy ekeko fa ny hevitra ny manampy tahiry hametrahana rindrambaiko izay hampakarina any amin'ireo trano fisakafoanana ofisialy dia tsy mahaliana ahy ao anatin'ny fotoana fohy. Fa satria fantatro fa tsy ianareo rehetra no mieritreritra ahy ary misy ny olona te hanandrana an'ity karazana kinova preliminary ity dia hizara aminareo ny fomba hametrahana ny kinova manaraka an'ilay mpilalao malaza aho.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny zavatra tsy maintsy hataontsika dia ny manampy ny tahiry fitahirizana ireo kinova andrana. Mba hanaovana izany dia sokafy fotsiny ny terminal ary soraty izao manaraka izao:
Manaraka izany, manavao ireo trano fitahirizana izahay amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity:
Ary farany, mametraka ny VLC amin'ireto baiko manaraka ireto izahay
Raha toa ka efa napetrakao izy io dia tsy maintsy havaozy ny rafitra fiasanay hiseho ireo fonosana vaovao ary hametraka azy ireo.
Mazava ho azy, aza manantena fiovana lehibe. Ny ankamaroan'ny fiasa vaovao izay hampidirin'ilay kinova vaovao dia fanamboarana kely, fa ny fanovana kely rehetra dia lasa zava-dehibe raha toa ka manamboatra bug izay iainantsika amin'ilay olona voalohany. Efa nanandrana ve ianao? Ary ahoana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Ahoana ny fametrahana VLC 3.0 amin'ny Ubuntu 16.04
Louis Ramirez dia hoy izy:
Salama namana, afaka manampy ahy ve ianao, heveriko fa tsy mifanaraka amin'ny Ubuntu ny solosainako. : /
Valiny tamin'i Luis Ramirez
Ali niak dia hoy izy:
Inona avy ireo singa ao aminy?
Valiny tamin'i Ali Niak
tranoheva hp 15-ab111la amd-a10 io.
Ny olana dia rehefa apetrako amin'ny maody fitsapana dia mandeha tsara sy ny zava-drehetra izy fa mandritra ny iray minitra (Saika marina, rehefa tapitra ny birao), dia tapaka izy
Salama namana manana olana amin'ny fametrahana Ubuntu amin'ny solosainako. Efa naneho hevitra anao tamina lahatsoratra hafa aho fa mbola tsy nahazo valiny. XD
Mandalina ny rafitry ny solosaina aho ary hita fa mila solosaina matanjaka aho, ary tsara ... Nanana fotoana aho nampitaha ahy solosaina finday matanjaka, HP Pavillion 15 ab111la miaraka amin'ny AMD A-10 ... tsara izany solosaina salantsalany tsara, nisafidy azy aho satria nahafeno ny fepetra nilaiko tany am-pianarana sy ny zavatra naniriako azy, dia ny fametrahana Ubuntu.
Nanontany aho talohan'ny nividianako azy raha mifanaraka amin'ny Ubuntu izy ireo ary hoy izy ireo, saingy rehefa te-hametraka ilay milina aho dia hiverina indray, amin'ny fomba fitsapana dia mandeha tsara (mandritra ny iray minitra, dia mikatona izy io).
Ubuntu dia iray amin'ireo antony nisafidianako an'io milina io, ary satria hividy milina hafa aho dia heveriko fa tsy ho tanteraka izany.
Izay torohevitra hametrahana azy, haa ... miaraka amin'ny Windows 10 ao anaty boaty ny solosaina (tsy tiako xD).
Salama Luis. Tokony ho Ubuntu mahazatra ve izany sa afaka manandrana ny tsirony ofisialy? Ho an'ny solosaina mahazatra, izaho aloha hanandrana ny Ubuntu MATE. Na dia hitovy amin'ny an'ny kinova mahazatra aza izy io dia afaka miasa ho anao ny fanovana kely.
Ny zavatra mahazatra dia ny ho an'ny kinova farany ho mifanaraka kokoa noho ny teo aloha, fa azonao atao koa ny manandrana kinova taloha mba hahitana izay mitranga. Ny LTS teo aloha (mbola tohanana) dia 14.04.4.
Salama. Luis, manoro hevitra anao aho hampiasa 14.04.4. Izy io dia mifanaraka kokoa. Ny 16.04 dia mitondra lesoka maro. Nametraka 16.04 aho ary nanome ahy hadisoana. Tsy azoko ny antony, satria nakariko avy tao amin'ny pejy Ubuntu mihitsy. Avy eo ampidino ny kinova 14.04.4. Ary hatreto dia niasa tsara ho ahy izany.
Vinesco dia hoy izy:
ahoana raha te hiverina ao amin'ny ivon-toeran'ny rindrambaiko ubuntu izahay?
Valiny amin'i Vinesco
Alfonso Davila dia hoy izy:
Nametraka azy io niaraka tamin'ny fonosana snap aho ary tonga 3.0 tamin'ny alàlan'ny default
Mamaly an'i Alfonso Dávila
floki333 dia hoy izy:
Ampio aho manana olana fa tsy avelako hametraka azy aho (3.0.0 ~~ git20160525 + r64784 + 62 ~ ubuntu16.10.1)
Mamaly an'i floki333
Salama, misaotra betsaka mialoha ho an'ity bilaogy ity. mampiasa ubuntu miaraka amin'ny kubuntu mandritra ny fotoana lava aho. fa satria manavao ny ubuntu amin'ny 16.04 aho dia tsy misy fomba mihazakazaka vlc. ataoko tsara ny dingana rehetra tsy misy hadisoana. ny vlc tsy hanomboka. izaho koa tsy mba nanana olana tamin'ny fitaovako. na dia ary nanandrana repository marobe aza ary mitohy ny olana. misaotra nanomboka izao.
Salama daholo, indrindra fa i Luis, tsy misy ifandraisany amin'ny hoe HP ilay solosaina, nametraka Ubuntu tamin'ny HP Pavilion miaraka amina processeur A6 aho ary tena tsara ny ataoko, mieritreritra aho fa tsy mametraka ny andrana fa mandehana. mivantana amin'ny fametrahana mahazatra, ataovy ny fizaranao ary andramo indray.
Manana fitaratra napetraka aho ka ny masinin'ireo sisa dia manavao ny tenany sy mandray ilay rindrambaiko avy eo nefa tsy mandeha amin'ny Internet. Napetrako miaraka amin'ireo tahiry voatanisa ao amin'ny lisitra loharano ubuntu 18.04. Tonga tamiko izany fa rehefa te hametraka ilay vlc aho dia nilaza tamiko fa tsy misy ilay programa. Mety hitranga izany? Tsy nampidiriko ny tahiry mitovy amin'izany?
Ity ny lisitry ny repos:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu voafetra ny bionic main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu voafetra ny fanavaozana bionic
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu tontolo bionika
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-fanavaozana izao rehetra izao
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-fanavaozana multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports lehibe izao tontolo izao voafetra
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu voafetra ny fiarovana ny bionika
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu tontolo fiarovana-bionika
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic fiarovana multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu mpiara-miasa bionic
Manazava aho fa rehefa mampiasa ny programa apt-mirror sy ny fikirakirana ny rakitra mirror.list aho dia tsy misintona afa-tsy ireo fonosana ho an'ny maritrano amd64.
Tsy tiako ny mandehandeha manampy trano fitehirizana tsy miankina ivelan'ny ofisialy, ka tiako ny hamaha ity olana ity.
Miarahaba sy misaotra
Jose Sanchez del Rio dia hoy izy:
Jose Sanchez del rio ETO. !!!
Valiny tamin'i Jose Sanchez del RIo
Ahoana ny fanesorana ny voan-trondro taloha amin'ny Ubuntu
Ny kinova vaovaon'ny Ubuntu SDK IDE vonona hitsapa